लकडाउनको बेला भर्खरै बानेश्वमा घटेको यो घटना ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनको बेला भर्खरै बानेश्वमा घटेको यो घटना !
काठमाडौं । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण ब्यवसाय चौपट भएको र बैंको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएपछि ब्यवसायीले पसल खोल्न थालेका छन् । विहिवार देखि पसल ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका कारण काठमाडौंका केही मुख्य बजारमा पसल सञ्चालनमा छन् । मंगलवार पसल खोल्न पुगेका ब्यवसायी र प्रहरीबीच काठमाडौंको न्युरोडमा झ’डप समेत भएको छ ।
प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर पसल खोल्न नदिएपछि काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका ब्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी ब्यवसायीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
लामो समय देखिको बन्दका कारण आफुहरु सडकमै आउने अवस्था हुँदा पनि सरकार गम्भिर नभएको उनीहरुको आरोप छ । ब्यवसायीले ५ वटा माग अघि सार्दै सरकारले ति माग पुरा गरेमात्र पसल बन्द गर्न सकिने जनाएका छन् । वैज्ञानीक घर भाडा निर्धारण, लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट, बैंक तथा बित्तिय संस्थाको ऋण मिनाहा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने विविध कर र बालबच्चाको विद्यालय शुल्क तथा व्यापारी व्यवसायीहरुको व्यवसाय सुचारु गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न संघले माग राखेको छ ।
सरकार आफुहरुको यि माग प्रति गम्भिर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी ब्यवसायीको छ । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण कतिपय ब्यवसायी पलायन समेत भइसकेको उनीहरुको भनाई छ । घरबेटीलाई दिनु पर्ने घरभाडा, बैकको ब्याज, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, स्थानीय निकायलाई तिर्नु पर्ने व्यवसाय कर, बालबच्चाको विद्यालय शुल्क जस्ता विषयमा सरकारबाट कुनै पनि सम्बोधन नगरेकाले बाध्य भएर आफुहरु ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको ब्यवसायीको भनाई छ । सरकार गम्भिर नभए साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायको ताला चावी सरकारलाई बुझाउने अवस्था आइसकेको बताएका छन् ।
त्यस्तै बालुवाटार नजिकै रहेको खुर्सानीटार क्षेत्रका व्यापारीले सबै किसिमका पसल सुचारुका साथै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि प्रहरीले बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । नाराजुलुस र विरोध हुन थालेपछि पानीको फोहोरा हानेर व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ ।
खेतीबाली लगाउने यो समयमा महामारीका कारण ओछ्यानमा छट्पटाउँदै किसान